Fiangonana Evanjelika Shine
José Hector Rial Laguia
Fiteny egiptiana taloha
Boky fahatelonny Mekabiana
Christophe Jérôme Barthélemy Lapommeraye
Ny tigra no karazana saka mbola be dia be ary mpikambana ao aminny karazana Panthera. Mankasitraka indrindra aminny lokony miendrika maizina aminny volom-boasary volontany miaraka amina maivana kokoa. Izy io dia mpihaza tampon-tany, ary ny biby t ...
I Ptolemaiosy XIII, izay atao hoe Ptolemaiosy XIII Teosy Filopatora, dia iray aminireo farao faraparany tao Egipta taminny andronny fitondranny dinastia lagida nialoha kely ny vanimpotoana romana. Nandimby ani Ptolemaiosy XII Neosy Dionisosy izy ...
2005 12 and Holding - Gus Maitland 1995 National Lampoons Senior Trip - Dags 2007 28 Weeks Later - Sergeant Doyle 2009 The Hurt Locker - Sergeant First Class William James 2012 The Avengers - Clint Barton/Hawkeye 2007 The Assassination of Jesse - ...
2010: The A-Team - Templeton Arthur "The Faceman" Peck 2008: The Midnight Meat Train - Trash 2009: All About Steve - Steve Gunders 2008: The Rocker - Trash Grice 2003: The Last Cowboy - Morgan Murphy 2008: Older than America - Luke 2013: American ...
2010 Ramona and Beezus - Hobart 2010 Life as We Know It - Eric Messer 2004 The Picture of Dorian Gray - Dorian Gray 2012 Fire with Fire - Jeremy Coleman 2006 Turistas - Alex 2007 Transformers - Capt. William Lennox 2010 The Romantics - Tom 2011 N ...
Ny jodaisma mpitahiry, izay atao hoe koa Masorti, dia firehanny jodaisma rabinika izay mandray ny fotokevitry ny fanavaozana nefa tsy mandray izany ho lasan-davitra loatra na lalina loatra. Ny fihetsiketsehana masorti dia mitonon-tena ho firehana ...
Ny fanatitra dia fanomezana ataonny mpino ho anny andriamanitra na ho anny zavatra ivavahana, na hoanny olona na zavatra hafa hanomezam-boninahitra anilay na ireo andriamanitra na ilay zavatra ivavahana. Maro karazana ny fanaovana fanatitra, ka a ...
Angélica Ksyvickis Huck, teraka taminny 30 Novambra 1973 tany Santo André, São Paulo, Brazila, dia mpanolotra eo aminny televiziona brazilianina.
I Jean Bosco izay fantatra aminny anarana Don Bosco taminizy natao ho pretra, teraka ny 16 Aogositra 1815 tany Castelnuovo dAsti ary maty ny 31 Janoary 1888, dia pretra italiana, mpanabe ary mpanoratra niaina taminny taonjato faha-19. Navadiky Pa ...
Ny elektrôna dia potipotika subatomika, marika e− na β−, izay sarany herinaratra dia miiba iray aminny fiampangana fototra. Ny elektrôna dia ao anatinny taranaka voalohany aminny fianakaviana poti-leptôna, ary aminny ankapobeny dia heverina ho so ...
I Dariosy III na Dariosa III dia mpanjakani Persia taminny taona 336 hatraminny taona 330 tal. J.K. Teraka taminny taona 380 tal. J.K. izy ary maty taminny taona 330 tal. J.K. Izy no mpanjaka akemenida farany. Zafiafini Dariosy II izy. Ny eonoka ...
Fiangonana Loterana Malagasy Nohavaozina
Ny Fiangonana Loterana Malagasy Nohavaozina dia fiangonana loterana fantatra indrindra manaraka ny Fiangonana Loterana Malagasy. Ahitana izany fiangonana izany ny ao amin ny distrikan Antanifotsy sy ao Antanarnaivo. Ahitana azy koa any Toliara sy ...
Ranavalonjafy, zanakavavin-dRasavolahy zandriny dia nanangana ho zanaka ny Dr Andrianangaly, 12 Vtra, isan’ ny nianatra ho Dokotera mpitsabo voalohany tamin’ ny Dr Davidson sy niara-niasa taminy; izy no ray niteraka ny Dr Andrianaly. Any Sambaina ...
Ny maingoka dia biby aritirôpôdy voasokajy ao aminny araknida. samihafa aminny araknida ny maingoka aminny pedipalpany tahaka tandra ary aminny fanoitra misy poizina ananany any an-tendronny kibony.
Ny hitsikitsika dia karazam-borona tsy dia lehibe loatra, mitovy loko aminny takatra manopy mainty, tokony ho 30 sm eo ho eo ny halavany ary mivelona amin ny fihazana ny biby madinika sy ny bibikely. Atao hoe Tinnunculus na Falco tinnunculus ny a ...
Dina (zanaki Jakôba)
I Dina dia zanakavavini Jakoba tamini Lea araka ny Bokinny Genesisy ao aminny Baiboly. Niverina any aminny tany Kanana niaraka aminny vady aman-janany i Jakoba rehefa avy nandany taona maro tao amini Labana rafozany. Nividy tany tao aminny faritr ...
Ny sombin-tanini Gaza, izay atao fotsiny hoe Gaza, dia velaran-tany kilavalava mirefy 41 km manamorona ny morontsiraki Mediteranea, any Atsinanana Akaiky, sy manana sakany 6 km hatraminny 12 km, ary manana velarana 360 km 2. Avy aminny anaranny t ...
I Besosy dia solontenanny emperora tany aminny faritri Baktriana sady mpitari-tafika taminny nanjakani Dariosy III. Rehefa resini Aleksandra Lehibe i Dariosy III ka taminny taona 330 tal. J.K. nandositra dia nivadika taminny mpanjaka i Besosy ka ...
Ny Vetus Latina na Vetus Itala dia anarana iombonana iantsoana ny dikan-teny tranan ny Baiboly amin ny teny latina talohan ny Volgata izay nadika avy tamin ny lahatsoratra amin ny teny grika. Efa tany amin ny taonjato faha-2 ny tranainy indrindra ...
Ny teôzôfia dia fomba fiainana ara-pilozofia sy ara-pivavahana, ary endrika manokanny fikatsahana ara-panahy ny fahalalana ny amin Andriamanitra sy izao tontolo izao aminny alalanny fahatsapana mistika mivantana sy ny fametraham-panontaniana ara- ...
I Rafael Nadal Parera dia mpilalao tenisy espaniola teraka ny 3 Jiona 1986 tany Manacor ao Mallorca, ao aminny tambanosini Baleares, any Espaina. Nandresy tao Rolland Garros izy ny taona 2005, 2006, 2007, 2008, 2010 ary 2011. Nandresy tao Wimbled ...
Ny kilasinanarana dia sokajinanarana manokana fehezinny fitsipiteny ao aminny fiteny iray sady manana ny marika ahafantarana azy manokana. Akoatra ny fanasokajiana ara-pitsipiteny ny anarana ho kandahy na kambavy, ho anaranny manana aina na tsy m ...
I Ignatiosy avy any Antiokia na Ignatiosy Teoforosy, izay teraka taminny taona 35 tao aminny faritanini Siria ary maty martiry tany Roma, angamba teo anelanelanny taona 107 na 113, dia eveka fahatelo tao Antiokia, taoriani Petera sy i Evodiosy, i ...
I Hazaela dia mpanjakani Arama-Damaskosy taminny taona 842 hatraminny 805 tal. J.K. Araka ny voalazanny Baiboly dia tandapa izy talohanny haha mpanjaka azy. Nandritra ny fanapahany dia lasa fanjakana lehibe i Arama-Damaskosy izay nanapaka ny ampa ...
I Dalila dia vehivavy resahina ao aminny Baiboly izay isanireo vehivavy nampitondra faisana ny Zanaki Israely noho izy nasainny fahavaloni Israely, ny Filistina, hamantara ny tsiambaratelonny herini Samsona izay niraiki-pitia taminy. Ao aminny Bo ...
Ny anarana hoe Azazela dia teny hita ao aminny Tanakh sy ao aminny soratra apokrifa sasany ilazana ny anjely potraka iray. Any aminny no andefasana osilahy hitondra ny fahotanny Jiosy mandritra ny fetinny Yom Kippur. Enti-manondro demony taminny ...
Ny Alarobianny Lavenona, aminny Katôlika, ampitson ny Talata Matavy, dia andro fivalozana izay manamarika ny fanombohan ny fari-potoan ny Karemy izay maharitra efatra andro. Fety miovaova daty izany. Amin ireo Fiangonana tatsinanana dia ny Alatsi ...
I Damaso, izay antsoina hoe Papa Damaso I, dia evekani Roma teo anelanelanny taona 366 sy 384. Olom-pirenena romana izy nefa Espaniola ny ray aman-dreniny. Teraka taminny taona 305 tao Roma sy maty taminny 11 Desambra 384 tao Roma ihany koa izy. ...
Ny satrapa dia ny governora mifehy faritany atao hoe satrapia, ka nisolo tena mivantana ny fitondrana foibe taminny fananany ny fahefanny mpanjaka na ny emperora, tao aminny empira persiana izay mbola nitohy taminny fanjakani Makedonia ary ny emp ...
Ny Watch Tower Bible and Tract Society dia fikambanana tsy mikatsaka tombotsoa manokana izay manana ny foibeny ao Warwick ao aminny Fanjakani New York. Izy no fikambanana ara-dalana ampiasainny Vavolombeloni Jehovah maneran-tany mba handamina sy ...
Teraka tany Kopenaga, Danemarka tamin’ny taona 1813 i Søren Aabye Kierkegaard. Mpivarotra ny rainy ary mpivavaka tena nafana fo. 7 ry zareo no mpiray tampo. Tamin’ny taona 1821 izy no niditra tao amin’ny sekoly tsy miankina Borgerdydsskole. Nanoh ...
Ny Filazantsarani Tomasy na Evanjelini Tôma dia filazantsara na evanjely tsy voaray ao anatinny Baiboly kristiana sady tsy ahitana afa-tsy izay atao hoe "tenini Jesosy" miisa 144. Nosokajinny Fiangonana Lehibe ho apokrifa izy ka tsy hita intsony ...
Charlie Baker, teraka taminny 1952, dia mpamily NASCAR. Nahavita ny fiadiana ny amboara 12 Winston izy taminny asany, taminny famaranana ny faha-18 tsara indrindra. I Charlie dia nalaza ho mpamily nahomby indrindra taminny tantaranny hazakazaka G ...
Ny Salamo faha-12 na Salamo 12 dia salamo ao aminny Bokinny Salamo ao aminny Baiboly. Tafiditra ao aminny fizaràna atao hoe "boky voalohany" ity salamo ity.
Waleed Al-Husseini, teraka taminny 25 Jona 1989 tao Qalqilya, dia Palestinina mpanoratra tsy mino anAndriamanitra, mpanorina ny Conseil des ex-musulmans de France. Lasa nalaza eran-tany izy nanomboka taminny taona 2010 izay nisamborana sy nanagad ...
I Ismaela dia olona resahina ao aminny Baiboly sy ny Korany. Izy no zanaki Abrahama voalohany raha mbola tsy niteraka ani Isaka i Saraha. I Hagara, vehivavy Egiptiana, mpanompovavini Saraha no reniny. Taty aoriana dia teraka i Isaka. Taminny fara ...
Ny fiarakaretsaka na taksy dia fiarakodia, amin ny ankapobeny madinika, atokana ho an ny fitaterana ny mpandeha sy ny entany manokana, andoavam-bola, ka mametraka azy ireo akaikin ny toerana tiany haleha araka izay azo atao, fa tsy amin ny toeram ...
.yu dia ny top-level domain fehezan-dalàna ho anny Yogoslavia ao aminny aterineto. Ny code dia nofoanana taminny 30 septambra 2009. Jereo koa: Lisitry ny ambony-pitenenana.
.dd dia ny top-level domain fehezan-dalàna ho anny Alemana Atsinanana aminny Aterineto. Aminny firaisana indray ny Alemaina, nampiasa ny fehezan-dalàna.de. Jereo koa: Lisitry ny ambony-pitenenana.
.su dia ny top-level domain fehezan-dalàna ho anny Firaisana Sovietika ny Aterineto. Na dia ny Firaisana Sovietika tsy misy intsony, ny fehezan-dalàna dia mbola ampiasaina mihoatra ny 100.000 ny tranonkala ao aminny fehezan-dalàna ity. Jereo koa: ...
Ny fandikan-teny dia ny fampitana ny hevitra entin’ny hafatra iray nosoratana tamin’ny fiteny iray amin’ny fiteny iray hafa. Ny fandikan-teny dia mety atao na am-bava na an-tsoratra. Noho ny fangatahan’ny raharaham-barotra iraisam-pirenena nanomb ...
Ny voa dia taova bevongana roa hita ao aminny biby. Eo aminny ankavia sy havanana izy ireo ao aminny habakabaka, ary aminny olon-dehibe dia mahatratra 12 santimetatra ny halavany.
Ny kilometatra dia singam-pandrefasana voasintona avy aminny metatra. Misy arivo metatra ny ray kilometatra. 1 km = 10 3 m = 1 000 m Io singam-pandrefesana io dia ampiasaina aminny fandrefesana ny halava ny lalana na ni halaviranny tanàna.
Elon Musk dia Mpandraharaha, Mpiantoka, Injeniera sy Mpamorona mizaka ny zom-pirenenny Afrika Atsimo, ny Kanada sy ny Etazonia teraka ny 28 jona 1971 tao Pretoria. Izy no Filoha-Tale Jeneralinny orinasa SpaceX ary Tale jeneralinny orinasa Tesla,i ...
Eudy Simelane dia mpilalao baolina kitra mizaka ny zom-pireneni Afrika Atsimo teraka ny 11 Martsa 1977 tao Johannesburg ary maty ny 28 Aprily 2008 tao Johannesburg
Jamie Uys dia mpilalao, talen-koronantsary, mpamoaka horonantsary mizaka ny zom-pireneni Afrika Atsimo teraka ny 30 Mey 1921 ary maty ny 29 Janoary 1996 tao Johannesburg
Thomas Charles John Bain dia injeniera sivily, injeniera mizaka ny zom-pireneni Afrika Atsimo teraka ny 29 Septambra 1830 ary maty ny 29 Septambra 1893
Janet Suzman dia mpilalao, talen-koronantsary, mpilalao aminny horonantsary, mpilalao aminny fahitalavitra mizaka ny zom-pireneni Afrika Atsimo teraka ny 9 Febroary 1939 tao Johannesburg
Sharlto Copley dia mpilalao, talen-koronantsary, mpamoaka horonantsary, mpanoratra senariô mizaka ny zom-pireneni Afrika Atsimo teraka ny 27 %s 1973 ary maty ny 27 11 1973
Ny fiteny zolo dia fiteny isanny vondrom-piteny ngony ao aminireo fiteny banto. Isanny fiteny be mpampiasa indrindra ao aminny faritra atsimo ao Afrika.